Petrin Hill ပန်းခြံရှိမြင်ကွင်းများနှင့်လေထုသည်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှတစ်ခုအတွက်ဖြစ်စေသည်5ဥရောပ၌အကောင်းဆုံးပျော်ပွဲစားအစက်အပြောက်. ဖြစ်ချင်တော့, Lesser Town တွင်တည်ရှိသည်, Petrin Hill သည်စိမ်းလန်းသောဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးပရာ့ဂ်ရဲတိုက်ကိုအပေါ်စီးမှမြင်သည်. Petrin သည်မြို့တော်၏အလှပဆုံးရှုခင်းများကိုပေးသည်, ပြီးတော့မင်းအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးမျှော်စင်ကိုတက်နိုင်တယ် တကယ်သာယာလှပသောအမြင်များ မြို့သူမြို့သား, ရဲတိုက်, နှင့်တံတားများ.
Petrin Hill သည်နွေရာသီတွင်ဥရောပ၌ပျော်ပွဲစားထွက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, နွေ ဦး ရာသီသို့မဟုတ်နွေရာသီ. The leafage will look ကျဆုံးခြင်းအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် နွေ ဦး ရာသီနှင့်နွေရာသီတွင်သစ်ပင်များနှင့်မြေအားလုံးသည်စိမ်းလန်းစိုပြေလာမည်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှသီးနှင့်အတူအချို့သော scones ဖမ်းပြီး Artic Bakehouse သင်တို့ရှိသမျှသည်ပရာ့ဂ်၌အံ့ဖွယ်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသည်.
ပါရီမှာမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိပါတယ် လှပသောဥယျာဉ်များ နှင့် Seine တစ်လျှောက်တွင်ပျော်ပွဲစားအစက်အပြောက်. ပါရီမြို့၏အကောင်းဆုံးပျော်ပွဲစားပွဲတော်သည်ထင်ရှားသော Champs de Mars အာကာသတစ်လျှောက်တွင်ဖြစ်သည်.
နွေရာသီတွင်ပါရီမြို့ရှိမိသားစုများသည်နေကိုစုပ်ယူရန်သို့မဟုတ်ဥယျာဉ်များ၏ကျဆုံးခြင်းရှုခင်းကိုခံစားရန်ရောက်ရှိလာကြသည်. ၎င်းသည်အလွန်အေးအေးဆေးဆေးရှိပြီး Eiffel မျှော်စင်ညအလင်းအိမ်များကိုကြည့်ရှုရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောနေရာဖြစ်သည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်“ ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးအစက်အပြောက် ၅ ခု” ကိုသင်၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့တင်ရန်သင်လိုလားသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-picnic-spots-europe/?lang=my ့– (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
ပျော်ပွဲစားထွက်ခြင်း picniceurope အချစ် မင်းကွန်း မင်္ဂလာပါ နေခြည် ပုဂံ travelswitzerland